Isikhunta Sobuso Esizenzele: Ukupheka, Izinzuzo, Amathiphu nokuningi! | Amadoda aSitayela
Ukukhuhla ubuso okuzenzele
Faka nesikhuhli sobuso esenziwe ekhaya ohlelweni lwakho lokuzilungisa kuzokusiza ukuthi uzuze ubuso obuhlanzekile nobunempilo, noma ngabe unentshebe noma cha.
Amadoda amaningi acabanga ukuthi ukukhishwa exfoliation kuyinto engabalulekile, mhlawumbe ngoba igama ngokwalo lizwakala likhukhumele. Kepha iqiniso ukuthi liyasebenza. Isikhumba sobuso sibukeka kangcono kakhulu, ngoba zibalulekile ukususa amakhanda amnyama namaseli afile.
1 Izinzuzo zokukhuhla ubuso ezenziwe ekhaya
2 Kufanele ukhiphe nini ubuso bakho?
3 Ungakhipha ubuso bakho kangaki?
4 Ikhofi yokuzenzela ebusweni
5 Isikhumbuzi Sobuso Esenziwe Ngolamula Esenziwe Ngokwabo
Izinzuzo zokukhuhla ubuso ezenziwe ekhaya
Njengoba izithako ngokuvamile wonke umuntu anazo ekhaya zisetshenzisiwe (ezinye sezivele zisetshenzisiwe njengoba sizobona kamuva), inzuzo yokuqala ukuthi yonga imali kuma-scrub abizayo.
Ngokungafani nezinto zokwenziwa, izikhuhla ezenziwe ekhaya zivumela ukuthi silawule zonke izithako. Lokhu kulula gwema ukuthintana namakhemikhali angadala ukucasuka nokunye ukusabela kwesikhumba okungahambi kahle.
Kokubili ukukhuhla okwenziwe nokwenziwe kwemvelo ukuvimbela izinwele ezingenayo nezintshevu ezilumayo. Le mikhiqizo ihlukanisa izinwele futhi isuse amangqamuzana afile nokunye ukungcola, ikhuthaza ukuvuselelwa kwesikhumba ngaphansi kwentshebe.
Kufanele ukhiphe nini ubuso bakho?
Ukukhishwa ebusweni kungenziwa nganoma yisiphi isikhathi sosuku. Noma kunjalo, ukukwenza ngaphambi noma ngesikhathi sokugeza kuzokongela isikhathi. Futhi ukuthi ukugeza ubuso bakho ngamanzi afudumele ukuvula ama-pores kuyingxenye yokulungiselela ukukhishwa kwamafutha. Ngendlela efanayo yokuthi ukuqeda kuyadingeka ukufaka i-moisturizer.
Okuthathwa njengokubalulekile ukuthi ungasebenzisi noma yiluphi uhlobo lokugcoba ubuso ngaphambi kokushefa. Zama ukubeka lezi zenzo ezimbili ezingacasula ukuvumela isikhumba sakho ukuba siphinde siphinde sithole phakathi kwento nenye.
Ungakhipha ubuso bakho kangaki?
Ngokungafani nezinye izimonyo (i-moisturizer, i-concealer stick, njll.), Izikhuhla zobuso azisetshenziswa nsuku zonke. Kabili ngesonto kubhekwa imvamisa efanelekile ezimweni eziningi.
Kanye ngesonto imvamisa engasebenza futhi. Uma kukhulunywa ngesikhumba sobuso, kubalulekile ukwenza umzamo wokusazi kahle nokwazi ukuthi sinakekelwa kanjani futhi nini. Lokhu kungathatha isikhathi, kepha uma usukutholile, inqubo yakho yokuhlanzeka izoba lula futhi ibe namandla.
Ikhofi yokuzenzela ebusweni
Uma uthandana nekhofi (ikakhulukazi iphunga lalo), uzothanda lokhu kuxubha okwenziwe ebusweni. Kubuye futhi indlela enhle yokuphinda usebenzise kabusha izindawo zekhofi.
Ikhofi liphikisana nokuvuvukala futhi liyaqinisa, izakhiwo ezimbili isikhumba sakho esingazuza kakhulu kuzo uma usishiya imizuzu embalwa njengesifihla-buso.
3 wezipuni izizathu zekhofi
3 wezipuni uwoyela we-olive
Isipuni esingu-1 soju (ongakukhetha)
Hlanganisa zonke izithako esitsheni uze uhlangane kahle. Faka isicelo sokugcoba ubuso bekhofi ebusweni nasentanyeni ngokunyakaza, okuyindilinga.
Uma unentshebe, le yindawo okufanele uhlale kuyo umzuzu. Inhloso ukufinyelela amaseli afile anqwabelana ngaphansi kwezinwele zobuso.
Shiya isikhumba esikhunjeni sakho imizuzu engu-3-4 ngaphambi kokugeza ubuso ngamanzi. Ithawula loma, uqaphele ukuthi ungasebenzisi ingcindezi eningi.
Nota: Uma ungayisebenzisi yonke, yigcine efrijini esitsheni sesikhathi esizayo. Ngaphansi kwalezi zimo ingxube ingagcinwa isesimweni esihle amasonto ambalwa.
Isikhumbuzi Sobuso Esenziwe Ngolamula Esenziwe Ngokwabo
Ulamula nosawoti kwenza iqembu elikhulu, hhayi nje kuphela uma kukhulunywa ngokuphuza i-tequila. Lezi zithako ezimbili ziyakhipha, zihlanze futhi zithambise isikhumba.
Lesi sikhuhla sobuso esenziwe ekhaya sinezinto zokulwa namagciwane. Ngale ndlela, ingakusiza gcina izinduna nezinye izisihla ebusweni.
Kungumqondo omuhle kakhulu uma unesikhumba esinamafutha, ngoba ulamula ubhekwa njengophumelelayo ekususeni i-sebum eyeqile.
1/2 ijusi kalamula
Thela ijusi kalamula esitsheni esincane. Faka usawoti kuze kube yilapho ubukhulu obufunayo bufinyelelwa. Akudingeki ukuthi ibe uketshezi kakhulu noma ibe mkhulu kakhulu, yize kuyindaba yokuzikhethela komuntu.
Sebenzisa iphedi kakotini ukufaka lokhu kuhuqa okwenziwe esikhumbeni sobuso nentamo. Dweba imibuthano emincane imizuzu emi-2-3.
Phinda ufake i-disc engxenyeni izikhathi eziningi ngangokunokwenzeka ngesikhathi esibekiwe.
Geza ubuso bakho ngamanzi afudumele. Qaphela ukuze ulamula nosawoti kungahlangani namehlo. Sebenzisa ukucophelela okufanayo lapho usomisa, ngoba kulokhu kufanele sengeze ukuthi isikhumba sihlala sizwela ikakhulukazi isikhashana ngemuva kokwenza ukukhishwa.
Qaphela: Noma kuzuzisa, kubalulekile ukungasebenzisi ulamula omningi enhlanganisweni. Ukuze uqiniseke, sebenzisa izingxenye ezimbili zikasawoti kulamula ngamunye.
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » Ukunakekelwa komuntu siqu » Ukukhuhla ubuso okuzenzele
Yeka indatshana enhle, ngihlala ngiphenya nsuku zonke indlela engcono yokuhlanza nokunakekela isikhumba ebusweni bami, njengetiphu eyengeziwe yokuqhubeka nokunakekela ubuso bethu noma silele, isikhwama semilenze sikasilika esihle sisiza kakhulu ukunciphisa amabala nezinduna ebusweni bethu, angizange ngikholwe ngize ngithathe isinqumo sokuthenga eyodwa, ingisizile kakhulu, ngiyithengile kuLuxybear futhi ngiyayithanda!